न बुझिन्छ, न बुझाइन्छ- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
म मैथिल समुदायमा हुर्के–बढेकी केटी । एकाबिहानै हजुरबुवाले गाउनुभएको ‘पराती’को मीठो लय कानमा पथ्र्यो । उत्सवहरूमा सोहर, समदाओन, डहकन, बटगवनी, महेशवाणी गाइन्छ । दसैंमा झिझिया सुनेँ तर यीमध्ये कुनै गीत पनि परीक्षामा लेख्न सकिनँ ।
श्रावण १९, २०७५ शिल्पा कर्ण
काठमाडौँ — हामीकहाँ बुझेर पढिंदैन, केवल रटिन्छ मात्रै । समाज बुझाइ र सामाजिक शिक्षाका किताबहरू गफका शास्त्रझैं लाग्छन् । हामीकहाँ विद्यार्थीको बौद्धिकता र क्षमता मापन गरिने विज्ञान र गणितजस्ता विषय मात्रै पढाइन्छ । समाजशास्त्र कहींकतै हराइरहेको छ । यो समाज बुझ्ने र बुझाउने यहाँ न शिक्षक छन्, न प्राध्यापक ।
सोसल पढाउने टिचर किन यति बोरिङ हुन्छन् ?’ एसईई दिएर प्लस टु पढ्ने तयारीमा रहेकी बहिनीले एकाबिहानै प्रश्न गरिन् । सुरुमा हाँस उठ्यो प्रश्न सुनेर । ‘सोसल टिचर मात्रै ? हामीलाई त सबै टिचर बोरिङ लाग्थे,’ तुरुन्तै म जवाफी बनें ।
जवाफ त दिएँ । तर, उनको प्रश्नले केही बेर सोच्न बाध्य बनायो । अनि आफ्नै स्कुले जीवन सम्झेँ । विद्यार्थीका लागि अधिकांश शिक्षकका बारे समान धारणा वा ‘पूर्वाग्रह’ हुन सक्छ । जस्तो : गणित पढाउने शिक्षक जति (शिक्षिका होइन) छुच्चा हुन्छन् । सामाजिक र नेपाली पढाउने शिक्षकलाई केही आउँदैन । अंग्रेजी पढाउने शिक्षक निकै ट्यालेन्ट हुन्छन् (सरकारी स्कुलका हकमा) आदि–इत्यादि ।’
आफ्नो औपचारिक विद्यार्थी जीवन सम्झिनुपर्दा स्नातक पढ्दासम्म ४ वटा शैक्षिक संस्था पुग्नुपर्‍यो । सबै सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय र कलेज थिए, पठनपाठन माध्यम नेपाली थियो । कक्षा ५ सम्म बाल मन्दिरमा पढेँ । एक जना गणितकी शिक्षिका थिइन्, राम्रै पढाउँथिन् । नढाँटी भन्दा केही छुच्ची पनि लाग्थिन् । विद्यालयमा सबै विषय पढाउने शिक्षिका मात्रै थिए ।
सायद ५ कक्षासम्मका विषय थिए— हाम्रो नेपाली, गणित, मेरो सेरोफेरो र अंग्रेजी । कक्षा ५ मा पढ्दा होला, नयाँ शैक्षिक विधिको प्रयोग गर्न थालिएको थियो । २/४ दिन खल्ती–खल्ती भएको सेतो कपडालाई ब्ल्याकबोर्डमाथि टाँगेर त्यसमा विभिन्न चित्र बनाइएका कार्ड राखिएका थिए । त्यसैलाई देखाएर पढाइयो, बाहिरबाट हेर्न आएका रमिते र अनुगमनकर्तालाई पनि देखाइयो ।
त्यसबेलाको प्राथमिक तह अर्थात् ५ कक्षा पढेपछि अर्को सरकारी विद्यालयमा भर्ना भएँ । त्यहाँ ‘विद्यार्थीको बौद्धिकता र क्षमता मापन गरिने विषय’ विज्ञान र गणित पढाउने शिक्षक पुरुष थिए । एक जना मिस अंग्रेजी पढाउनुहुन्थ्यो, मिस पनि साह्रै छुच्ची लाग्नुहुन्थ्यो, अंग्रेजीका शब्दार्थ कण्ठ गरिएन भने हत्केला रातै हुनेगरी छडीले पिट्नुहुन्थ्यो ।
कक्षा ८ अर्थात् त्यसबेलाको माध्यमिक तहमा पनि पढाउने धेरैजसो पुरुष थिए । सामाजिक शिक्षा र नेपाली पढाउने दुई जना शिक्षिका हुनुहुन्थ्यो । खै, किन आफू विद्यार्थी हुँदा पनि यी विषय पढाउने शिक्षिकालाई कहिल्यै ‘ट्यालेन्ट’ भन्न सकिएन । बुझ्न सक्दिनँ यी विषयका दोष थिए वा लिंगका, ती विषयमाथि भेदभाव थियो वा शिक्षकमाथि ।
यसरी अहिलेसम्म आफू वरपरको समाज अध्ययन गर्ने अवसर विद्यालय जान थालेदेखि नै सुरु भयो । अक्षर चिन्न थालेपछि किताबबाट समाज चिन्ने पहिलो पुस्तक थियो— मेरो/हाम्रो सेरोफेरो । त्यसका चित्रले आकर्षित गर्थे, आफ्नै वरपरका चित्र लाग्थे । पछि सामाजिक अध्ययन भन्ने विषयमा पनि समाज बुझाउन खोजिएको थियो । तर, मैले बुझिनँ, मलाई लाग्छ धेरैले बुझेनन् । कक्षा १० सम्म जति पनि सामाजिक शिक्षा पढियो, ती सबै परीक्षा उत्तीर्ण गर्नका लागि थिए ।
अहिले आफू बसेको समाज हेर्दा लाग्छ, मैले अझ समाज चिनेकै छैन । समाजशास्त्रको अध्ययन सहज छैन, निकै गहन छ । देश विदेशका छाडौं, आफ्नै देशका पनि हरेक समाजका हरेक पाटा बुझ्न सम्भव छैन । तर, विद्यार्थीको उमेर र कक्षाअनुसार पाठ्यक्रममा राखिएका ‘समाज’ पनि धेरैले बुझ्न सकेका छैनन् ।
परीक्षामा हरेक प्रश्नको एउटा निश्चित ‘प्याटर्न’ मा जवाफ लेख्थे, म मात्र होइन— मैले चिनेका मेरा साथी पनि । मानौं, त्यो गणित र विज्ञान हो जहाँ २ गुणा २ बराबर ४ हुन्छ अथवा दुई हाइड्रोजन र एक अक्सिजन मिल्दा पानी बन्छ । शिक्षकहरूले लेखाउने प्रश्नोत्तर उस्तै हुन्थे, सिर्जनशीलता, मौलिकता र विद्यार्थीको आफ्नो जवाफका लागि पटक्कै स्थान हुँदैनथ्यो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यार्थीलाई समाज, सामाजिक मूल्य मान्यता, रीतिरिवाज, एकता र सद्भावसँग परिचित गराउन सिकाउने उद्देश्यले यो विषय र यसको पाठ्यक्रम ‘डिजाइन’ गरेको होला । तर, एउटा विद्यार्थीको नाताले मैले यी कुराहरू कहिल्यै बुझिनँ, अनुभव गर्न पाइनँ । सामाजिक शिक्षकले हाम्रो समाजलाई केवल किताबका केही घोकन्ते प्रश्नोत्तरमा सीमित गराइदिएझैं लाग्छ । जबकि यसले हाम्रो वरपरको समाजलाई किताबसँग जोड्नुपर्ने हो । सामाजिक विषय कुनै रट्ने किताब होइन, तिमीहरूकै वरपरको वातावरण, सेरोफेरो बुझ्ने विषय हो भनेर बुझाउन, पढाउन सक्नुपर्ने हो ।
अझ अहिले निजी र अंग्रेजी माध्यमका विद्यालयमा पढ्ने बहिनीलाई हेर्छु र दोधारमा पर्छु— पढेका हुन् कि रटेका हुन् ? पढाउने शिक्षकले आफूले लेखाएभन्दा एक शब्द यताउति भए कि नम्बर काट्ने रहेछन् । कोर्सभन्दा बाहेकका एउटै शब्द वा शब्दार्थ विद्यार्थीलाई थाहा पाउनै मुस्किल छ । प्रयोगात्मक क्रियाकलाप भनेर सामाजिक विषयमा पनि अभ्यास गराउन दिइएका हुँदा रहेछन् । तर, शिक्षकले गराउँदैनन् । न मैले गरेँ, न मेरा बहिनी र नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीलाई गराइएको देख्छु । यसरी विद्यार्थी समाज बुझ्नबाट वञ्चित भइरहेझैं लाग्छ ।
कक्षा १० अर्थात् एसएलसी परीक्षाको बेला सम्झिन्छु । जतिखेरसम्म म सामाजिक शिक्षा भनेको ‘गफ दिने विषय’ भन्ने बुझ्थेँ । हामीलाई सामाजिक पढाउने शिक्षकले दिनहुँ कुनै किताब ल्याएर त्यसबाट लेखाउनुहुन्थ्यो । हामी पनि खुइँखुइँ साथ्र्यौं । घर गएर न सामाजिक शिक्षा किताब पल्टाइन्थ्यो, न अघि कक्षामा पाठ सारेको कपी पल्टिन्थ्यो । बरु गणित र विज्ञान पढ्थेँ, गृहकार्य गर्थें ।
एसएलसीमा आफ्नो समुदायमा गाइने गीत लेख्न प्रश्न आएको थियो, सायद १० अंकभारको । सातो गयो, कुन गीत लेख्ने । छेउको साथीले हातमा चिट थमायो । सार्ने धुनमा सारेँ— पछि हेर्दा त गेसपेपरको उक्त पानामा सुदूरपश्चिममा गाइने देउडा गीत सारेकी रहिछु । परीक्षा सकिएपछि थाहा भयो, म मात्र होइन कक्षाभरिका सबैले देउडा नै लेखेका रहेछन् । नेपालको पूर्वी जिल्लामध्येमा पर्ने स्थानमा कसरी देउडा गीत गाइन्छ होला, अहिले सम्झिँदा आफ्नो मूर्खता मात्र होइन, एकैसाथ शिक्षकको कमजोरी पनि देख्छु ।
म मैथिल समुदायमा हुर्के–बढेकी केटी । एकाबिहानै हजुरबुवाले गाउनुभएको ‘पराती’ (बिहानी भजन) को मीठो लय कानमा पथ्र्यो । महिनैपिच्छे पूजा हुन्थ्यो र ममी, काकी, हजुरआमा भगवती, धर्मराज र कुलदेवताको गीत गाउनुहुन्थ्यो । विवाह उत्सवहरूमा सोहर, समदाओन, डहकन, बटगवनी, महेशवाणी आदि गाइन्छ । दसैंमा झिझिया सुनेँ तर यीमध्ये कुनै गीत पनि परीक्षामा लेख्न सकिनँ अथवा पाइनँ । एक हिसाबले सही गरेजस्तो पनि लाग्छ, किनकि यदि मैले मैथिलीमा लेखेको भए कापी जाँच्नेले बुझ्थे कि बुझ्दैनथे अथवा अंक दिन्थे कि दिँदैनथे ?
अहिले मलाई लाग्छ त्यसबेला न म, न त मेरा शिक्षकले ‘सामाजिक विषय’ बुझ्न सकेका थिए । शिक्षकले बुझेका भए पो विद्यार्थीलाई बुझाउँथे । हामीलाई किताबभन्दा बाहिर हाम्रो संस्कृति र समाज कहिल्यै पढाइएन, न अभ्यास गराइयो । ‘आफ्नो समाजमा गाइने गीत भोलि सबैले कक्षामा सुनाउनुपर्छ है’ भनेर शिक्षकले भन्नुभएको भए सायद म घर गएर ममीसँग कुनै मैथिली गीत सिकेर आउनेथिएँ । तर सकिनँ, अहिले पनि गाउन सक्दिनँ । जबकि हाम्रो हरेक पूजा, व्रतबन्ध, सबैमा आवाजजस्तो भए पनि गीतको लय नबिगारी गाउनु अनिवार्य हुन्छ । तर, समाज नबुझेको हाम्रो पुस्ताले यसलाई कसरी निरन्तरता देला खै ?
हुन त सामाजिक विषयमै इतिहास, भूगोल, रहनसहन र संस्कृति सबै समेटिएका थिए । ती घोक्नैपर्ने थिए तर धेरै कुरा यस्ता पनि थिए जुन हामीले बुझ्नुपर्ने थियो । हामीेलाई पढाएको जस्तो नभई हाम्रै समाज बुझाएको जस्तो लाग्नुपर्ने थियो तर लागेन ।
समाजशास्त्र कर्मचारीले सहज विषय लिएर पास गरी बढुवाका लागि दाबी गर्ने मात्र विषय होइन । न त नामका लागि स्नातक वा स्नातकोत्तर पास गरेको छु भनेर देखाउने विषय हो । यो साह्रै गह्रौं विषय हो, अध्ययनको विषय हो, समाज विज्ञान हो, समाजको गणीत हुन्छ ।
गणित, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या शिक्षा, लेखा, अंग्रेजीजस्ता विषयगत शिक्षक आवश्यक भए शिक्षक सेवा आयोगमा लड्न सो विषय नै पढेको हुनुपर्छ । जबकि सामाजिक अध्ययन पढाउन समाजशास्त्र वा समाज विज्ञान विषय नै पढेको खोजिन्न ।
अहिले राजनीतिशास्त्रमा म पढ्दै छु, ‘मानिस एक राजनीतिक प्राणी हो ।’ तर त्यसभन्दा धेरै अघिदेखि पढेकी छु, ‘मानिस एक सामाजिक प्राणी हो ।’ राजनीतिक भने पनि अथवा सामाजिक भने पनि निश्चयै यो समाज परिवर्तनशील छ । तर, हरेक समाजका विशेषता छन्, तिनलाई कायम राख्न सामाजिक अध्ययन अनिवार्य छ । पर्याप्त प्रयोगात्मक क्रियाकलाप जरुरी छ, ताकि भविष्यमा कुनै विद्यार्थीले आफ्नै समाज र संस्कृतिबारे सोधिएको प्रश्नमा समेत गाइड वा गेसपेपर च्यात्नु नपरोस् ।
श्रावण १९, २०७५ डा. अरुणा उप्रेती
काठमाडौँ — नेपालको मुस्ताङ, मनाङ, कर्णाली भेगतिर उवा पर्याप्त पाइन्छ । नजिकको तीर्थ हेला भनेझैं उवा अहिले कर्णालीमै अपहेलित छ । काठमाडांैका मानिसलाई त उवाको बारेमा कुराकानी गर्‍यो भने कतिले त उवा र खुवा छुट्ट्याउन पनि सकिरहेका हुदैनन् । वास्तवमा उवा भनेको जौ नै हो । उवा आफैंमा ऊर्जा, सूक्ष्म पोषक तत्त्व, रेसादार पदार्थले भरिपूर्ण भोजन हो ।
केही महिनाअघि मेरी एक पत्रकार शर्मा थरकी साथी फिनल्यान्ड गएकी थिइन् । दस दिनको बसाइँपछि उनी काठमाडौं फर्केर भेटेपछि मैले सोधें, ‘मलाई के ल्याइदिऊँ त फिनल्यान्डबाट उपहार ?’ ‘तिमीलाई पाउरोटी ल्याइदिएकी छु,’ उनको भनाइले मनै अमिलो भयो । ‘त्यति टाढाबाट जाबो पाउरोटी । त्यो त म यहीं पाउँथें नि,’ मनमनै सोचें । उनले पाउरोटी दिएपछि पो आनन्द लाग्यो । यो त काठमाडौंमा पाउने मैदाले भनेको सेतो पत्रु पाउरोटी होइन, उवाले बनेको अति स्वास्थ्यकर पाउरोटी पो रहेछ ।
‘फिनल्यान्डमा त सेतो पाउरोटी खाँदैनन् । सरकारले त्यहाँका जनताको स्वास्थ्य राम्रो होस् भनेर पत्रु खानामा बढी कर लगाएको छ । र, स्वास्थ्यकर खाना खान प्रेरित गर्छ,’ म आफैं ८ वर्षअघि फिनल्यान्ड जाँदा एक नर्सले भनेको कुरा याद आयो । अनि पो मेरी साथीले ल्याइदिएको उपहार खुसी भएर लिएँ, त्यो उपहार पाएपछि मलाई मनमा झल्यास्य भयो, यस्तो राम्रो र पौष्टिक उवा त नेपालको मुस्ताङ, मनाङ, कर्णालीमा त पर्याप्त पाइन्छ तर ‘नजिकको तीर्थ हेला’ भनेझैं, त्यो उवाको महत्त्व नजानेरै होला, उवा अहिले कर्णालीमै अपहेलित छ । काठमाडांैका मानिसलाई त उवाको बारेमा कुराकानी गर्‍यो भने कतिले त ‘खुवा’ भनेर सुन्दा रहेछन् । कतिले चाहिँ ‘यस्तो आधुनिक जमानामा पनि के यस्तो पुरानो जमानाको मान्छेजस्तै कुरा गरेर, कर्णालीको उवाको कुरा गरेर हिँडेको । अहिले त कर्णालीमा उवा होइन सेतो भातको चलन छ । तिमी काठमाडौंमा बसे त लपक्क मीठो सेतो भात खाने । अनि उवाको कुरा गर्ने ।’ भनेर मलाई हपार्ने पनि गरेका छन् ।
कतिलाई चाहिँ उवा भनेको अचम्मैको अन्न हो भन्ने लाग्दो रहेछ । तर, वास्तवमा उवा भनेको जौ नै हो । स्थानीय भाषामा उवा भनेपछि बुझिन्छ । हावापानी ठाउँअनुसार उवाको पौष्टिक तत्त्व केही फरक होलान् तर उवा आफैंमा ऊर्जा, सूक्ष्म पोषक तत्त्व, रेसादार पदार्थले भरिपूर्ण भोजन हो ।
पहिलेपहिले मुस्ताङतिरको यात्रा गर्दा भरियाले उवाले बनेको चम्पा (जौ भुटेको पीठो) आफूसँग लैजान्थे । भोक लागे त्यही पानीमा घोलेर खान्थे । ६–७ घण्टा हिँड्न ऊर्जा सँगाल्थे । अहिले बाटो गएपछि त चाउचाउ र चिसो खान्छन् । अनि पैसा दिएर मुटुको रोग किन्छन् । उवा, किनुवा, चिनो आदि जस्तो अन्नलाई बिर्सेर चामलको स्वाद खोज्नेहरूलाई थाहा छैन कि यसो गरिरहँदा उनीहरूले कस्तूरी मृगझंै नाभिमा भएको सुगन्ध थाहा नपाएर, सुगन्ध खोज्न कताकता हिँडिरहेछन् । सायद फिनल्यान्डका पढे–लेखेका डाक्टर, सरकारी कर्मचारी, बालबालिकाले उवाबाट बनेको पाउरोटी खान्छन् भन्ने बुझे भने कर्णालीका बासिन्दाले उवालाई सम्मान गर्न सिकेर फेरि फलाउने प्रयत्न गर्थे कि ? अहिले त उवाको पिठो त्यहाँ दुर्लभ भएको छ ।
गत वर्ष जुम्लामा गएर उवाको पिठोबाट बनेको रोटी ख्वाउनुस् न भनेर भन्दा त्यहाँ हाँसाको फोहोरा चलेको थियो । ‘कहाँ यहाँ उवा पाउनु । कले खेतमा लगाउने ? कले खाने ? उवा किन्ने मान्छे छैनन् ? उवा खान्छु भनेर आएको तपाईं पहिलो मान्छे हो,’ उनीहरूको हाँसाले भरिपूर्ण यी वचन सुनेर मलाई दु:ख लागेको थियो । उवाको रोटी खान पाए त कस्तो पौष्टिकताले भरिपूर्ण खाना खाइन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । तर, के गर्ने सरकारले स्थानीय अन्नलाई बेवास्ता गर्ने र बाहिरबाट ल्याएको कुहिएको चामल खान जनतालाई विवश गराएको अवस्थामा जनता पनि के गरून् त ?
त्यही जुम्ला गएको बेला काठमाडौंबाट कोदो र फापरको २० वटा जति रोटी बनाएर लगेको थिएँ । ७ दिनसम्मको यात्रामा मेरो खाजा त्यही रह्यो । जुम्लाको होटलमा कोदोको रोटी बन्दैन रहेछन्, मैले चिया मगाएर झोलाबाट रोटी निकालेर चियासँगै चोप्दै खाँदा कति जनाले मलाई अचम्मको नजरले हेरेका थिए । चियामा बिस्कुट नचोपेर, कोदोको कालो रोटी चोपेको देखेर होला ।
यात्रामा सँगै हिँडेका एक जनाले त भनी पनि हाले ‘काठमाडौंबाट ल्याएको यो रोटी बासी भएन र ? बासी नखानू भन्ने अरूलाई, अनि आफूचाहिँ बासी खाने ? ‘तपाईंले पसलमा किन्ने बिस्कुट, चाउचाउ, कुरमुरेचाहिँ बासी हुँदैनन् । मैले घरमा बनाएर ल्याएको कसरी बासीे,’ मैले भनें ? उनीहरूलाई मैले जुम्लाको एक पसलमा किनेको रु. ५ जाने दालमोठको पोको देखाएँ, बदाममा ढुसी लागेको थियोमैले भनें, ‘यहाँका बच्चाहरूले यस्तै ढुसी लागेको बदाम खान्छन् । अनि कलेजोको रोगी बन्छन् । यस्तो दालमोठ त कुहिएको फालेको दालमोठ जम्मा गरेर बनाइन्छ । त्यस्तो कुरा थाहा छ कि छैन । यहाँका जनतालाई ?’ ‘त्यसो भए सरकारले किन प्रतिबन्ध लगाउँदैन त यस्तो कुरालाई,’ धेरैले बारम्बार भने । ‘सरकारले त चुरोट र रक्सीमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छैन । के बालबालिकालाई त्यो किनेर खान दिने त ?’ मेरो प्रश्नले प्राय: सबैको मुखमा बुजो त लाग्छ तर प्राय: सबै जना फेरि बजारको दालमोठ, चाउचाउ, बिस्कुट किनेर भक्कुमार खान्छन्, कर्णालीमा बच्चालाई दिन्छन् । पैसा तिरेर रोग किन्छन् । यिनीहरूलाई हेर्दा लाग्छ आफ्नो घरमा फल्ने उवा, कोदो, फापर च्युरालाई अपहेलना गरेर यिनले नजिकको तीर्थ हेला गरेका छन् । सायद फिनल्यान्डका मानिसहरू आएर कर्णाली, मुस्ताङ र मनाङको जौ अर्थात् उवा किन्न थाले भने अनि यहाँका सांसदहरू जुर्मुराउनेछन् । ‘ओहो! उवा भनेको त बडो स्वस्थ वस्तु रहेछ, यसले त स्वास्थ्य र आर्थिक स्थिति दुवै राम्रो हुँदो रहेछ । लौ भन उवा फलाऔं ।’ अनि काठमाडौंका मन्त्रीहरू पनि एक दिन मुस्ताङको खेतमा गएर उवाको बारेमा लामो भाषण गरेर उवा दिवस मनाइदिनेछन् । बल्ल अनि नेपालीहरूले उवा खाने बानी गर्लान् कि ? तर, मलाई कहिलेकाहीं हाम्रा धानका थुप्रै बीउहरू लुप्त भएझंै उवा नै लुप्त हुने त होइन भन्ने लागिरहन्छ ।
उवाको बीउ र परिकारको बारेमा हामी नेपालीले अंग्रेजी वा फ्रेन्च भाषामा लेखिएको किताबमा पढ्नुपर्ने भयो भने त वित्यास पर्ने हो कि ?
जसरी ‘योग’ नेपालबाट बाहिर गएर ‘योगा’ भएर नेपाल भित्रिएको छ । अहिले नेपाली पैसा तिरेर ‘योगा’ गर्छन्, योग बिसर््िाएका छन् । पछि उवाको बारेमा पढेर स्वास्थ्यविज्ञले लेखेका किताब पढेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा उर्दी निकाल्न बेर लगाउने छैन, ‘अबदेखि सबै बालबालिकाको खानामा एकएक चम्चा उवा छरिदिऊ । यसले बालबालिकालाई कुपोषणबाट बचाएर स्वस्थ बनाउनेछ । ‘अनि उवा बाहिरबाट ल्याएर बाँडिनेछ धेरै महँगोमा नेपालभरि । जब उवा जौ महँगो हुनेछ, प्याकेटमा राखिनेछ, अनि एक किलोको रु. ८ सय तिरेर किनिनेछ । व्यापारीहरू खोजीखोजी उवाको पोको बनाएर पसलमा राख्नेछन् । अनि नेपालीहरू दंग भएर महँगो उवा किन्नेछन् ।